कहाँ हरायो ८ हजार मिटरमाथिका हिमाल थपिने कुरो ? «
कहाँ हरायो ८ हजार मिटरमाथिका हिमाल थपिने कुरो ?
हालसम्म विश्वमा मान्यताप्राप्त ८ हजार मिटरभन्दा माथिका हिमाल १४ वटा रहेका छन् । त्यसमध्ये आठवटा (६० प्रतिशत) नेपालमा रहेका छन् । ती हुन्— विश्वकै सबैभन्दा अग्लो हिमशिखर चोमोलुङ्मा अर्थात् सगरमाथा, जुन हिमालको उचाइ ८ हजार ८ सय ४८.८६ मिटर छ । उता विश्वकै तेस्रो अग्लो हिमशिखर कञ्चनजंघा पनि नेपालमै रहेको छ, जुन हिमालको उचाइ ८ हजार ५ सय ८६ मिटर छ । त्यस्तै ८ हजार ५ सय १६ मिटर अग्लो ल्होत्से हिमशिखर पनि नेपालमै रहेको छ, जुन विश्वको चौथो अग्लो हिमशिखर हो । विश्वको पाँचौं अग्लो हिमाल मकालु पनि नेपालमै रहेको छ, जुन हिमालको उचाइ ८ हजार ४ सय ८६ मिटर हो । ८ हजार २ सय १ मिटर अग्लो चोओ यू पनि नेपालमै रहेको छ, जुन हिमाल विश्वको छैटौं अग्लो हिमाल हो ।
त्यस्तै विश्वको सातौं र आठौं अग्ला हिमाल पनि नेपालमै रहेका छन् । ती हिमालहरू क्रमशः ८ हजार १ सय ६७ मिटर अग्लो धौलागिरि र ८ हजार १ सय ६३ मिटर अग्लो मनास्लु हुन् भने १० औं अग्लो हिमाल अन्नपूर्ण प्रथम पनि नेपालमै रहेको छ । विश्वका बाँकी ६ वटा ८ हजार मिटर अग्ला हिमालमध्ये ५ वटा पाकिस्तानमा र एउटा चीनमा रहेको छ ।
हुन त पर्वतारोहण पर्यटन नेपालको पर्यटन उद्योगका लागि मेरुदण्ड नै हो भन्दा फरक पर्दैन । यसको अकाट्य प्रमाण भनेको हरेक वर्षको पर्यटकीय सिजनमा नेपालको विभिन्न हिमाल आरोहणका लागि आउने विभिन्न देशका हिमाल आरोहीहरूले गर्ने गरेको खर्चको विवरण पनि एक हो । जस्तो कि आजभन्दा लगभग १० वर्षअघि नेपाल पर्वतारोहण संघले सन् २०११ मा आफ्नो मुखपत्र ‘नेपाल पर्वत’मा प्रकाशित गरेको एक विवरणअनुसार नेपाल सरकारले ३३ वटा ससाना हिमाललाई नेपाल पर्वतारोहण संघलाई रेखदेख गर्ने, परमिटबापत शुल्क उठाउने लगायतको जिम्मेवारी दिएर सुम्पेको छ । ती ३३ वटा ट्रेकिङ पिक आरोहण गर्न आएका विदेशी पर्वतारोहीहरूले मात्रै सन् २०११ को स्प्रिङ सिजनमा ७२ लाख ९ हजार ३ सय ५६ अमेरिकी डलर खर्च गरेका थिए ।
उक्त सिजनमा ४ सय ४७ वटा पर्वतारोही टोलीले सलामी दस्तुरबापत मात्रै नेपाल पर्वतारोहण संघलाई १ लाख ८४ हजार ९ सय ७५ अमेरिकी डलर तिरेका थिए, जुन रकम तत्कालीन बजारभाउअनुसार सटही गर्दा नेपाल पर्वतारोहण संघलाई १ करोड ३३ लाख १८ हजार २ सय नेपाली रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । यसरी हेर्दा सन् २०११ मा मात्रै ३३ वटा ट्रेकिङ पिकहरूबाट नेपालले ५१ करोड ९० लाख ७३ हजार ६ सय ५० नेपाली रुपैयाँ आर्जन गरेको देखिन्छ ।
नेपाल भूगोल र जनसंख्याका आधारमा विश्वका अन्य देशको तुलनामा मध्यमस्तरको भए तापनि नेपालमा हिमरेखा (५ हजार ५ सय मिटर) भन्दा माथिका १७ सय १३ भन्दा बढी हिमाल रहेका छन् भने नेपाल सरकारले पटक–पटक गरेर लगभग ४ सय १४ वटा ५ हजार ५० मिटरभन्दा अग्ला हिमालहरू (छुकुङ–रीदेखि लिएर ८ जार ८ सय ४८.८६ मिटर अग्लो सगरमाथा अर्थात् चोमोलुङ्मासम्म पर्वतारोहणका लागि खुला गरेको छ ।
नेपालको पर्वतारोहण पर्यटनमा अर्को महत्वपूर्ण घटना भनेको अब नेपालमा विश्वमा ६ वटा नयाँ ८ हजार मिटरभन्दा माथिका हिमालहरू थप हुँदै छन् । तर, यो प्रसंग सुरु भएको लगभग तीन वर्ष हुँदा पनि यसरी थप हुने हिमालका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्थाबाट निर्णय हुन सकेको छैन । तापनि थप हुने ती सबै हिमाल संयोगले नेपालकै रहेका छन् । थपिने ती नयाँ ६ हिमालमध्ये कञ्चनजंघा हिम श्रृङ्खला र ल्होत्चे हिम श्रृङ्खलामा रहेको छ । यी नयाँ हिमालहरूको नाम र स्थान घोषणा गर्न स्विट्जरल्यान्डस्थित अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण संघको मुख्यालयबाट पर्वतारोहणसँग सम्बन्धित प्राविधिक टोली आउनुपर्छ ।
ट्रेकिङ पिक आरोहण